March 14, 2020 Zayar Phyo Han Premier League 0
Manchester United's Bruno Fernandes celebrates scoring his side's first goal of the game from the penalty spot during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. PA Photo. Picture date: Sunday February 23, 2020. See PA story SOCCER Man Utd. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
ပွီးခဲ့တဲ့ဇနျနဝါရီမှာ ကလပျနဲ့စာခြုပျပွီးကတညျးက မနျယူပရိသတျတှဆေီက ရရှိခဲ့တဲ့ အားပေးမှုကို သူခဈြခငျနှဈသကျကွောငျး ကှငျးလယျလူဖာနနျဒကျဈက ဝနျခံပွောကွားလိုကျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သူ့ကို သီခငျြးလုပျဆိုတာနဲ့ပတျသကျလို့ ဂုဏျယူရကွောငျး ဖာနနျဒကျဈက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈဟာ ရာသီကွားဖွတျကာလမှာ စပို့တငျးကနေ ပေါငျ ၄၇ သနျးနဲ့ ရောကျလာခဲ့တာဖွဈပွီး မနျယူအတှကျ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တနျအောငျလညျး ခွစှေမျးပွနသေူ ဖွဈပါတယျ။
သူဟာ အခုခြိနျထိ မနျယူအတှကျ ကစားပေးခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအရပျရပျ ၉ ပှဲမှာ ၃ ဂိုးသှငျး၊ ၄ ဂိုးဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မနျယူရဲ့နောကျဆုံး ၁၁ ပှဲဆကျရှုံးပှဲမရှိမှုမှာ အဓိကကခြဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ မနျယူပရိသတျတှဟော အသကျ ၂၅ နှဈအရှယျ ဖာနနျဒကျဈကို သီခငျြးလုပျဆိုရာမှာ သူ့ရဲ့ဟီးရိုးလညျးဖွဈ၊ အသငျးကွယျပှငျ့ဟောငျးလညျးဖွဈတဲ့ စီရျောနယျဒိုနဲ့ နှိုငျးယှဉျမှုပွုလုပျထားကွတာပါ။ နှဈယောကျစလုံးဟာ စပို့တငျးကနေ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကိုရောကျလာတဲ့ ကစားသမားဘဝ ခွလှေမျးခငျြးလညျး တူကွပါတယျ။
သူ့ကိုအငျတာဗြူးးတဲ့ Sky သတငျးဌာနက အစီအစဉျတငျဆကျသူလျောရာဝုဒျအတှကျ သူ့အတှကျ မနျယူပရိသတျတှလေုပျပေးတဲ့သီခငျြးအကွောငျးမေးခဲ့သလို အဲဒီသီခငျြးကို ဆိုနိုငျမလားလို့တောငျ မေးမွနျးတော့ ဖာနနျဒကျဈက ရယျပွီးတော့ ” ဘရူနို၊ ဘရူနို၊ ဘရူနို…ခရစ်စတီယာနိုလို စပို့တငျးကနေ သူရောကျလာတယျ…ဘယျလှညျ့လိုကျ၊ ညာလှညျ့လိုကျနဲ့ နောကျခံလူတှကေို သူအရူးလုပျတယျ…သူဟာ ငါတို့ရဲ့ပျေါတူဂီလူစှမျးကောငျးပါပဲ”လို့ သီဆိုပွခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီသီခငျြးနဲ့ပတျသကျလို့ ဖာနနျဒကျဈက ”ပထမဆုံးနကေ့တညျးက ပရိတျသတျတှဆေီက ကြှနျတျောရခဲ့တဲ့ အားပေးမှုဟာ အံ့သွစရာပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျ သူတို့လုပျပေးတဲ့ အဲဒီသီခငျြးကိုနားထောငျပွီးတော့ ငါ ဒီရောကျတာ ၂ ရကျပဲရှိသေးပမေယျ့ သီခငျြးတောငျ ရှိနပွေီလို့ တှေးမိပါတယျ။ ဒီပထမဆုံးလမှာ သူတို့ကြှနျတေျာ့ကိုပေးခဲ့တဲ့အခဈြဟာ တကယျကောငျးပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
သူနဲ့ပတ်သက်လို့ မန်ယူပရိသတ်တွေလုပ်ပေးတဲ့သီချင်းအတွက် ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်
ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီမှာ ကလပ်နဲ့စာချုပ်ပြီးကတည်းက မန်ယူပရိသတ်တွေဆီက ရရှိခဲ့တဲ့ အားပေးမှုကို သူချစ်ခင်နှစ်သက်ကြောင်း ကွင်းလယ်လူဖာနန်ဒက်စ်က ၀န်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ကို သီချင်းလုပ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဂုဏ်ယူရကြောင်း ဖာနန်ဒက်စ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ရာသီကြားဖြတ်ကာလမှာ စပို့တင်းကနေ ပေါင် ၄၇ သန်းနဲ့ ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး မန်ယူအတွက် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်အောင်လည်း ခြေစွမ်းပြနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အခုချိန်ထိ မန်ယူအတွက် ကစားပေးခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် ၉ ပွဲမှာ ၃ ဂိုးသွင်း၊ ၄ ဂိုးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန်ယူရဲ့နောက်ဆုံး ၁၁ ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိမှုမှာ အဓိကကျခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူပရိသတ်တွေဟာ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဖာနန်ဒက်စ်ကို သီချင်းလုပ်ဆိုရာမှာ သူ့ရဲ့ဟီးရိုးလည်းဖြစ်၊ အသင်းကြယ်ပွင့်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုပြုလုပ်ထားကြတာပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ စပို့တင်းကနေ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကိုရောက်လာတဲ့ ကစားသမားဘ၀ ခြေလှမ်းချင်းလည်း တူကြပါတယ်။
သူ့ကိုအင်တာဗျူးးတဲ့ Sky သတင်းဌာနက အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလော်ရာဝုဒ်အတွက် သူ့အတွက် မန်ယူပရိသတ်တွေလုပ်ပေးတဲ့သီချင်းအကြောင်းမေးခဲ့သလို အဲဒီသီချင်းကို ဆိုနိုင်မလားလို့တောင် မေးမြန်းတော့ ဖာနန်ဒက်စ်က ရယ်ပြီးတော့ ” ဘရူနို၊ ဘရူနို၊ ဘရူနို…ခရစ္စတီယာနိုလို စပို့တင်းကနေ သူရောက်လာတယ်…ဘယ်လှည့်လိုက်၊ ညာလှည့်လိုက်နဲ့ နောက်ခံလူတွေကို သူအရူးလုပ်တယ်…သူဟာ ငါတို့ရဲ့ပေါ်တူဂီလူစွမ်းကောင်းပါပဲ”လို့ သီဆိုပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖာနန်ဒက်စ်က ”ပထမဆုံးနေ့ကတည်းက ပရိတ်သတ်တွေဆီက ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ အားပေးမှုဟာ အံ့သြစရာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် သူတို့လုပ်ပေးတဲ့ အဲဒီသီချင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ ငါ ဒီရောက်တာ ၂ ရက်ပဲရှိသေးပေမယ့် သီချင်းတောင် ရှိနေပြီလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒီပထမဆုံးလမှာ သူတို့ကျွန်တော့်ကိုပေးခဲ့တဲ့အချစ်ဟာ တကယ်ကောင်းပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိနျမှာက တရုတျမှာထကျ ကိုရိုနာအခွအေနပေိုဆိုးလာလို့ အိမျပွနျသှားတဲ့ ဝူဟနျအသငျး